चौंरी गोठदेखि समन्वय समितिसम्म
समन्वय समितिको उपप्रमुखमा उहाँको जिम्मेवारी पक्कापक्की भएपछि बजारमा केही प्रश्नहरू थिए । अधिकारको नाममा पदको दुरुपयोग हो भन्नेहरू पनि थिए । प्रमुख नभएको समयमा घुमाएर धेरैले फाईदा लिन्छन् भन्ने पनि जनगुनासा थिए । उहाँलाई जिज्ञासा राख्दै गर्दा उहाँबाट आएका उत्तरबाट बजार हल्लामा सत्यता पाइन ।
जिल्ला समन्वय समिति निर्विरोध निर्वाचित भएको वा पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्ट । एक गैरसरकारी संस्थाले जनप्रतिनिधिलाई कार्यक्रमबारे जानकारी दिने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यही कार्यक्रममा सहभागी भइसकेर युवा दिवसको औपचारिक कार्यक्रमको पर्खाइमा रहेकी उपप्रमुख पदकी बिजेता छोपेमा तामाङको डायरीमा मेरो आँखा पुग्यो । समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर लेखिरहनु भएको थियो । बिस्तारै लेख्ने तर राम्रा अक्षर थिए ।
मैले कल्पना गरेको थिइन कि उहाँको त्यति राम्रो अक्षर छन् भनेर । केही कुरा गर्ने जिज्ञासा लाग्यो र मैले केही प्रश्न गरेँ । तपाइँ यो पदमा पुग्ने सोच्नु भाथ्यो ? जिल्ला विकासका लागि कस्ता योजना आवश्यक छन् ? महिलाको विकासको लागि के गर्नुपर्दछ ? यो पदलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ ? जस्ता प्रश्न थिए ।
अहिले त झन् सपना जस्तो भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा उपप्रमुख भएपछि । उनलाई र उनको परिवारलाई विश्वास थिएन, यो पद प्राप्त हुन्छ भनेर ।
मैले सोधेका प्रश्नको उत्तर मैले सोचेभन्दा राम्ररी आए । उहाँका लागि यो पद सम्हाल्नु चुनौतिपूर्ण नै थिए र छन् । समन्वय समितिको उपप्रमुखमा उहाँको जिम्मेवारी पक्कापक्की नै भएपछि बजारमा केही प्रश्नहरू थिए । अधिकारको नाममा पदको दुरुपयोग हो भन्नेहरू पनि थिए । प्रमुख नभएको समयमा घुमाएर धेरैले फाईदा लिन्छन् भन्ने पनि जनगुनासा थिए । मैले उहाँलाई जिज्ञासा राख्दै गर्दा उहाँबाट आएका उत्तरबाट त्यस्तो बजार हल्लामा सत्यता पाइन । गाउँका विकासका लागि जीविकोपार्जनमा आधारित उद्यम, सीप विकास र सडक सञ्जाल र पहुँच विस्तार गर्ने उहाँको उत्तर थियो । महिलाका लागि शिक्षा, सीप दिने र आमा समूहमार्फत् विकास गर्ने तथा राजनीतिमा पनि स्थापित गर्दै जाँदा विकास हुन्छ भन्ने उहाँको विश्वास छ । आफू यो पदमा रहँदा अरूबाट पनि सिक्दै जाने र कार्यकाल सफल बनाउने उहाँको सपना छ ।
विसं २०२४ सालमा जन्मिनुभएका छोपेमा तामाङको बुबा दावाफिञ्जो तामाङ राष्ट्रिय पञ्चायत समितिको उपाध्यक्ष बनेका थिए । यसअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचमा उहाँका परिवारका सदस्यहरू र बुबाले चुनाव जित्न नसकेको पनि बताउनु हुन्छ ।
साबिकको स्याफ्रु गाविसको वडा नं ४ सानोभार्खुको गाउँभन्दा निकै माथि रहेको साबिञ्जो वनमा चौंरी गोठमा आमा चेमेन्दो तामाङ तामाङको कोखबाट जन्मिनु भएको । छोपेमा तामाङ अहिले जिल्ला समन्वय समिति रसुवाको उपप्रमुख पदमा निर्विरोध चयन हुनु भएको छ ।
नेकपा (एमाले) ले हाल गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ५ को महिला सदस्य पदमा निर्वाचनमा उठाएपछि नै उनको लागि यो ढोला खुल्ला भएको हो । निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदित भएपछि र एमालेको जिल्लाभर पालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा बहुमत जित हात पारेपछि उनलाई जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गर्ने अवसर मिल्यो । गाउँघर र परिवारमा सबैले ''भाषण गर्न पनि आउँदैन, यो पद सम्हाल्न सकिदैन'' भनिरहेका थिए । यसका बाबजुद पनि उहाँलाई यो अवसर मिलेरै छाड्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा काठमाण्डौमा हुँदा एमालेका जिल्ला अध्यक्षले सदस्यमा नाम राखिदिएको खबर आयो । उनलाई थाहा थिएन, निर्वाचनकै लागि नाम सिफारिस भएको भनेर । घरमा आएपछि थाहा भयो । घरमा श्रीमानले गाली गर्नुभयो, राजनीतिमा सकृय रूपमा लाग्न भ्याइदैन भनेर ।
विसं २०२४ सालमा जन्मिनुभएका छोपेमा तामाङको बुबा दावाफिञ्जो तामाङ राष्ट्रिय पञ्चायत समितिको उपाध्यक्ष बनेका थिए । यसअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचमा उहाँका परिवारका सदस्यहरू र बुबाले चुनाव जित्न नसकेको पनि बताउनु हुन्छ । पहिला निर्वाचनका समयमा प्रचारप्रसारदेखि सबै कार्यका लागि उम्मेद्वार मात्रै सकृय हुनुपर्दथ्यो तर अहिले पार्टीले नै सबै क्रियाकलाप गर्ने भएकोले निर्वाचन जित्न सफल भएको अनुभूति छ उहाँलाई ।
विसं २०४२ सालमा टेस्ट पास हुनुभएकी तामाङ एसएलसी भने उत्तीर्ण हुन सक्नु भएन । उहाँको कार्यकुशलता कस्तो रहन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । उहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना ।।